American University in Dubai - Fianarana ambony any ivelany ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra
American University in Dubai Details
Firenena : Emirà Arabo Mitambatra
fanafohezan-teny : AUD
Créé : 1995
mpianatra (eo ho eo.) : 3000
Aza adino ny iaraho midinika ny American University in Dubai
Misoratra anarana ao amin'ny American University in Dubai
Ny American University in Dubai dia tsy miankina, tsy sekta rafitra ambony fianarana naorina tamin'ny 1995. AUD ny fisoratana anarana ao 2014-2015 nahatratra 2,700 mpianatra. In Spring 2015, maherin'ny zato no nisolo tena firenena tao amin'ny AUD mpianatra tena.
AUD manome na undergraduate sy ny diplaoma diplaoma sy Certificates any Afovoany Atsinanana sy ny Professional Teaching Fianarana. Ankoatra ny antokony ao amin'ny voafidy fandaharana / lehibe, undergraduate mpianatra rehetra dia tsy maintsy manaraka ny fitsipika ao amin'ny fandaharam-pianarana sy ny Siansa Zavakanto. Izany dia tanteraka ny fanabeazana ankapobeny anjara ny mari-pahaizana takiana.
Amin'ny alalan'ny ny Center for Ny fahaiza anglisy (CfEP), ny anjerimanontolo ihany koa ny mitarika intensive anglisy fandaharana natao mba hampitombo anjerimanontolo-ambaratonga teny anglisy fahaiza-manao amin'ny fiteny fanampiny ireo mpianatra mitaky fianarana alohan'ny manomboka oniversite.
Tonga soa ato amin'ny Anjerimanontolo Amerikana ao Dubai. Toy ny tranonkala rehetra-toerana, ity iray ity dia ahitana be dia be ny vaovao: zava-misy momba ny fankatoavana AUD, ny diplaoma fandaharana izay ataontsika ho, mpianatra asa mihoatra dakilasy fampianarana, trano sy ny olona - ireo mpianatra, mpitantana, sampam-pianarana sy ny mpiasa - izay mahaforona ny oniversite fiaraha-monina. Ny kofehy izay mampifandray azy no AUD rehetra ny tena American bita, Na izany aza amin'ny tanterak'i naneho fanajana ny toeram-ponenana an-toerana. Ny fikojakojana ny ambony akademika fitsipika; tsy manindry ny zava-baovao sy mitsikera; ny fambolena ny te hahafanta-javatra sy ny fanahin'ny nanontany; ary ny famantarana ny “olona manontolo” tahaka ny lasibatry ny olombelona sy ny fampandrosoana ara-kolontsaina ireo lafin-javatra izay tena manavaka American fanabeazana. Tsara ho marihana fa ireo indrindra ny soatoavina izay underpin ny oniversite ny maha-. koa, izy ireo no mandrafitra ny fahombiazan'ny ny mpianatra ao an-trano sy any ivelany, ny fahombiazana izay olo-malaza ao amin'ny oniversite talaky ny fanomezana ny fiaraha-monina. AUD tokoa ny toerana izay mamoaka ny tsara indrindra amin'ny mpifidy azy amin'ny fampahatsiahivana azy ireo ny hery anaty, niantso ho amin'ny fihetsiketsehana ny fahaizany sy ny zava-bita mahafa-po. No itokiako hitanao izao dia amin'ny alalan'ny izao tontolo izao ny AUD na hahazoana fahalalana sy mandrisika. Farafaharatsiny, Manantena aho fa manome zavatra ho anao hieritreritra momba ny ...
Dr. Lance E. de Masi
School maritrano, Art and Design
Department of Maritrano
Department of Atitany Design
Department of Visual Serasera
Sekolin'ny Zavakanto sy ny Siansa
Department of Business sy ny Toekarena
Departemantan'ny Vola sy ny Kaonty
Departemantan'ny Marketing sy Marketing Communications
Department of Engineering Solosaina sy elektrika
Taorian'ny Ady amin'ny Gulf 1991, Nisy ekipa notarihin'ny Elias Bou Saab avy ao amin'ny American College nitsidika ny Hoala Persika mba hanorina fifandraisana amin'ny asa fanompoana isan-karazany ny fianarana ambony ary koa ny faritra ny sekoly.
Ny tsy fisian'ny kalitaon'ny fampianarana tsy miankina tany amin'ny oniversite anivon'ny, miaraka amin'ny fankasitrahana ny Amerikana modely ny fianarana ambony, nitarika azy ireo mba hitondra ny maha- mety ny fianarana momba ny fanantenana ny fanorenana ny Anjerimanontolo Amerikana ao amin'ny Hoala Persika. Ny vokatra dia nanamafy ny avo lenta ny fahalianana sy ny faniriana ho fonenan'ny mpianatra fanatitra Amerikana-deraina fanabeazana fandaharam-pianarana.
Lasa haingana koa hita fa ny Emirà ny Dubai, ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra, mety ho tsara toerana ny toerana misy toy izany ny andrim-panjakana. Dubai no hita ho mafy orina ara-politika, cosmopolitan ka hatramin'ny faritry ny taniny-mitady fanapahana izay efa ho tsy nisy ny sehatra tsy miankina amin'ny fampianarana ambony dia vao nanomboka ny hitaona ny sasany saina.
Elias Bou Saab Nifindra tany Dubai in 1995 mba hametraka amin'ny fomba ofisialy ny American University in Dubai, izay kosa dia tsy ho azo atao raha tsy misy ny fanoloran-tena sy ny fanohanana hatramin'ny voalohany ny H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Filoha lefitra sy ny Praiminisitra ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra, Mpitondra ny Dubai. Hatramin'izao, Ny fahamboniako manohy ny fanohanany tsy manam-petra fianarana ambony amin'ny ankapobeny sy ny oniversite indrindra.
Ny American University in Dubai nanokatra ny varavarany tamin'ny Oktobra 1995 ho toy ny toeram-pianarana ao amin'ny sampana American College, mipetraka any Atlanta, Georgia.
Ny voalohany AUD fisoratana anarana dia 165 mpianatra, ny antsasany izay vehivavy. Tamin'ny fotoana teo aloha sy ny Sekreteram-panjakana James Baker bola nanome ny Keynote AUD voalohany amin'ny fiandohan in 1998, fisoratana anarana dia niakatra ho any 499; ary ny governemanta Dubai, ho fanehoana ny matoky, dia nanapa-kevitra ny hanorina fonenan'ny mpianatra ny 1,400,000 kianja tongotrareo ho fampiasana ny oniversite. AUD nifindra hiala amin'ny voalohany hevi nibodo ity vaovao, malalaka, ampy fitaovana tanteraka toeram-pianarana tamin'ny Janoary 2000. Ny fisoratana anarana tamin'izany andro izany dia 687.
The taona 2000 koa manan-danja, satria ny tamin'ny taona io fa ny oniversite tamin'ny fomba ofisialy ny fahazoan-dalana avy amin'ny Emira Arabo Mitambatra Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Siantifika (MOHE). Ny sehatra tsy miankina ho an'ny fianarana ambony efa nitombo be ny hatramin'ny nanorenana AUD, ary ny Ministera nahita mendrika hanorina ofisialy licensure sy (taty aoriana) fankatoavana dingana. Tamin'ny 2000 fa lehibe indrindra AUD akademika sampan-draharaha - Business Administration - dia organizationally voatondro ho toy ny sekoly. In 2001, ny taratasy iray ny fahazavan-tsaina no nanao sonia teo amin'ny American University in Dubai (AUD) ary ny Georgia Sekoly Momba ny Teknolojia any Atlanta, GA mba hanorina sekoly ny injeniera. Solontena avy any Georgia Tech, anisan'izany ny sampam-pianarana ambony enina sy ny fitantanana manamboninahitra, Nitsidika AUD mba hamita ny fanomanana ny fampifanarahana ny fandaharam-pianarana ho amin'ny fepetra takiana ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra.
In December 2007, ary ny fanintelony hatramin'ny fanokafana in 1995, Ny American University in Dubai tsy miankina nahazo fankatoavana avy amin'ny Southern Fikambanan'ny Colleges sy ny Sekoly (SACS), iray amin'ireo faritra fito Amerika ny fomba fanomezana naniraka. AUD no voalohany sy hany rafitra ivelan'ny Etazonia sy Amerika Latina mba homena izany voninahitra izany ny SACS. AUD izao ny andrim-panjakana mahaleotena tanteraka.
Ny Anjerimanontolo Amerikana ao Dubai hatrany koa ny fifanakalozana ihany koa ny fandaharana amin'ny Georgia Sekoly Momba ny Teknolojia any Atlanta, GA. Mpianatra avy amin'ny andrim-panjakana roa dia afaka maka taranja ary mandray voninahitra ny fifanakalozana amin'ny alalan'ny fandaharana.
Ianao ve mila iaraho midinika ny American University in Dubai ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
American University in Dubai amin'ny Map
Photos: American University in Dubai ofisialy Facebook
American University in Dubai Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny American University in Dubai.
Other oniversite any Emirà Arabo Mitambatra
Emirà Arabo Mitambatra University Al Ain
Fitsaboana oniversite ao Rosia ambony 2016